तपाईको आज शनिवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त विशेष शुभ ? « Sansar News
तपाईको आज शनिवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क-कसलाई छ त विशेष शुभ ?
४ मंसिर २०७८, शनिबार ०७:३१
बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिले ठूलो अवसर दिलाउन सक्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मान–सम्मान प्राप्त हुनेछ।
२०७८ मंसिर ४ गते, शनिवार, २० नोभेम्बर २०२१